Zonke amaphuphu kancane bheka nse. Hlukanisa nabesifazane kusukela kwabesilisa ngokubonakala yabo kuyinkinga kakhulu. Nokho, a amasu ambalwa anembile ekhethekile sexing amaphuphu isasekhona. Mayelana ukuthi kuyini, futhi sizobe ukukhuluma kamuva kulesi sihloko.
Ngakho, indlela yokwahlukanisa phakathi iphuphu ubudala usuku kusukela inkukhu cockerel? Lokhu kungenziwa, isibonelo, ngendlela efanayo ukuthi Sekuyisikhathi eside esetshenziswa emizaneni Russian. Le ndlela kuyinto anolaka kancane hhayi olunembile kakhulu. Kodwa ukuzama ukucacisa ubulili of iphuphu ngakho-ke Kusengenzeka. Inkukhu wena nje udinga ukuthatha imilenze nesiphakanyisiwe emoyeni. Kukholakala ukuthi abesilisa nakuba ukuzihlalela ngokuphepha. Inkukhu uzama ukuthatha isikhundla lesifanele emkhathini, edonsa ikhanda lakhe phambili.
Ungazama ukusebenzisa indlela futhi ethambile. Ukuze wenze lokhu, uma sikubeka kalula inkukhu ngemuva esandleni sakhe ikhanda lakhe ishiywa ngaphandle ukwesekwa. Inkukhu, njengoba kwaba njalo endabeni yokuqala, ke Niyolibutha, kanye iqhude "iconsi" emuva. Yiqiniso, kulesi simo, njengoba esikhathini esedlule, isikhathi eside kakhulu ukuhlupha "ichwane akudingekile.
On umbuzo kanjani ukuhlukanisa abesifazane kusukela kwabesilisa izinkukhu, kukhona enye impendulo. Chick udinga ukuthatha ngokucophelela phezu "emahlombe" amaphiko ngezandla zombili futhi kancane siphakamise umoya. Kukholakala ukuthi inkukhu nge isiqalo ukubheka ngokushesha imilenze. Petushki nje ngomoya ophansi hang.
Zonke lezi zindlela akuzona eyinkimbinkimbi kakhulu, kodwa ngeshwa, aluthembekile ikakhulukazi. Amaphesenti sokunquma ubulili amatshwele ekusebenziseni kwabo uphansi.
Indlela ukuhlukanisa abesifazane kusukela kwabesilisa amaphuphu: indlela yesimanje
Phesheya izinkukhu amapulazi, lapho amaphuphu kuvame alungise ngosuku lokuqala ngemva ukuchamisela, esetshenziselwa ubulili ukuzimisela kahle elula, umnene futhi ngesikhathi esifanayo oluphakeme indlela enembile. itholakala yokuthi inkukhu edonswa futhi izimpaphe iphiko ucabangela. Uma ezimbili eziningi kumakwe kahle, emazingeni ehlukene - ngakho-ke inkukhu. Uma zonke leziya zimpaphe zinobude obulinganako - Cockerel.
Ukunquma ubulili amatshwele enkulu
Manje ake sibone ukuthi ukuhlola inkukhu (inkukhu noma iqhude kuyakuhambisa egcekeni) uma kwenzeka ukuthi uye esekhulile. Kulula ngokwanele. abalimi abanolwazi bakholelwa ukuthi emavikini ekucala izinkukhu zikhule kwabesilisa kancane ngokushesha. Ngokuhamba kwesikhathi, isimo uyashintsha. Petushki uhambisane zikufice izinkukhu. Abanye abanikazi emakhaya ukunquma ocansini amatshwele kanye imisila phezu kwesilinganiso sokudlondlobala. Kukholakala ukuthi izinsikazi iqala ukukhula isheshe - ezinsukwini ezimbalwa nje ngemva ukuchamisela. Petushki futhi inamathele kuyo kuphela amasonto ambalwa.
Indlela ukuthola ucansi phambi ukuchamisela
Kukholakala ukuthi ninquma ukuthi ubani kamuva uphume iqanda - inkukhu noma iqhude, akuyona into engenakwenzeka. Nokho, abanye abalimi ngezinye izikhathi kuvela ukwandisa umkhiqizo iphesenti ubulili oyifunayo amatshwele. Ukuze ukwazi ukubona ukuthi ubani vposleduyuschem achamusela i incubator noma ngaphansi isikhukhukazi, iqanda kufanele zihlolwe ngokucophelela. Ochwepheshe abaningi ukweluleka hhayi ukuthatha for zizalela labo lapho airbag ingekho maphakathi ekupheleni blunt futhi aqale. Phakathi naleso sikhathi, amanye abanikazi amapulazi yasendlini, abalimi yezikhukhukazi laying, kunalokho, uthanda ukubeka incubator ukuthi amaqanda enjalo. Yiqiniso, bathatha kuphela labo lapho ikhamera idluliswa kancane. Kukholakala ukuthi amaqanda enjalo ngokuyinhloko inkukhu kanye okukhiphayo. Ngokwazi iqiniso, akwaziwa. Mhlawumbe kungcono kwazenzakalela nje.
Futhi, ekugcineni abukhali iqanda ingabonwa ukunquma bobulili we inkukhu. Ngokusho abanye abalimi, uma kukhona uhlevane noma, okungcono nakakhulu, livimbezele projecting lime indandatho - it is Cishe ukuchamisela izinkukhu.
Ukunakekela amachwane osanda kuzalwa
Ngakho, wena Manje usuyazi ukuthi ukuhlukanisa abesifazane kusukela kwabesilisa amatshwele. Manje ake uthole indlela kahle ukunakekela amaphuphu. Iphuzu liwukuthi engeyena nzima, kodwa unesibopho kakhulu. Lokhu kusebenza ikakhulukazi ukuze izinsana.
Ngosuku lokuqala emva omiswe, izinkukhu i incubator at izinkukhu amapulazi futhi amapulazi amakhulu ezibekwe kuyo ezikhethekile. Abanikazi yithuluzi elikhulu engadini ngokuvamile etshalwe amaphuphu nje achamusela amakhadibhodi amabhokisi. Phakathi nale nkathi yokuphila ingane kufanele basingatha esiphezulu. Okokuqala, kubalulekile ukuba ukuhlela indawo kokukhanyisa kubo. Okwesibili, ukuze kukhushulwe izinga lokushisa emoyeni kuze kube 30-32 degrees. Ukuze wenze lokhu, ungakwazi efakwa ebhokisini of ibhodlela plastic ngamanzi ashisayo noma isihlabathi noma isetshenziswe njengekhubalo heater we ezivamile incandescent isibani. Emapulazini amakhulu edingekayo lokushisa endaweni ukwesekwa emkhombeni ne nemishini ekhethekile. Yigcine ezingeni 30-32 degrees kufanele kube ngesonto lokuqala. Kungokufanayo uya for ukukhanyisa ubusuku nemini.
Ukunakekela amachwane day ubudala
Abanye abalimi ukholelwa ukuthi okuphakelayo amaphuphu kufanele kube usuku lokuqala emva kokuzalwa. Abanye ukweluleka ukulinda usuku. Iqiniso liwukuthi emva kokukhululwa kwe-amaqanda izinkukhu i umzimba kukhona ngokwanele izakhi abazithola ngesikhathi namanje ngaphakathi. I stock siyaphela ngemva kwamahora angu-24. Emva kwalesi sikhathi kubuya izingane ukuze ondle futhi aphuzise kumelwe. Njengoba for broiler izinkukhu, ebeka izikhukhukazi kanye ukusetshenziswa okuhamba phambili kwe-iyinhlanganisela olukhethekile "Qala" (ezihlukahlukene).
Ungase futhi ukondla amachwane abavamile Iqanda abilisiwe namabele. Ngemva kwezinsuku ezimbalwa ngokuvamile ziqale cottage shizi.
Abaphuzayo kwamaphuphu kumele kusetshenziswe ekhethekile. I evamile izinkukhu ezincane akwazi ukugibela noma nje uwa phansi manzi. Lokhu ngokuvamile kuba imbangela yokufa of amaphuphu. Iqiniso liwukuthi lapho izimpaphe ezimanzi kuyinto eqinile obandayo umntwana. Lokhu ikakhulukazi kusebenza broiler. Lapho amaphuphu ezimanzi abanganaki kudingeka ome ngokushesha ngangokunokwenzeka futhi ubeke endaweni efudumele ngangokunokwenzeka.
amaphuphu usuku nanhlanu eyishumi ubudala
Ngosuku lwesikhombisa izinga lokushisa ebhokisini kungenziwa sehliselwe 28 ° C esikhanyisa "ekhaya" izingane ngalesi sikhathi kufanele sibe okungenani amahora 17-18 ngosuku. Yiphe ingane namanje wokudla melkodroblenymi, cottage shizi no amakhambi. A umqondo omuhle ukuze ungeze ekudleni izaqathi. amaphuphu Five-eziyishumi osemdala Ungasavele uqale accustom emgwaqweni. Yiqiniso, kuphela uma izimvume sezulu. Kana eyenziwa yendlu kwesokudla ebhokisini washiya kafushane egcekeni.
Kusukela ubudala izinkukhu eziyishumi ayaqala ukudoba noma zokuhlatshwa imfucuza. Ikakhulu, amathuluzi asetshenziswayo ziwusizo broilers. ibhokisi zikhanyiswe amaphuphu ngalesi sikhathi kufanele kube cishe 14 amahora. I ukhululekile kakhulu izinkukhu ezindala kuka kwezinsuku eziyishumi, izinga lokushisa 20-24 degrees. izikhukhukazi Ukubeka ngalesi sikhathi kungenziwa kwesokunxele emgwaqeni usuku lonke futhi alethe ekhaya kuphela ebusuku. Kamuva amaphuphu idluliselwe ngokukhethekile aligcinelwe ngesikhathi umjondolo.
With izikhukhukazi amabili aneminyaka engu-ngokuvamile ziqale Mash (ntambama) nokusanhlamvu (ekuseni nakusihlwa). Broiler nezinkukhu ngalesi sikhathi bebelokhu ukuthola abilisiwe okhamiwe wahlanganiswa amazambane (izinto eziningi ezincane), fresh cottage shizi, elinebhotela, nokunye. D. Lokho, izinkukhu kancane idluliselwe ekudleni omdala.
Umgomo oyinhloko abalimi kulokhu ijubane Ukudayela isisindo izinkukhu. Ngakho-ke, iningi Ukudla nyoni kufanele kube okusanhlamvu (okungenani u-50%). Kufanele ukhawule ukunyakaza izinkukhu. On Paddock zabo, ngokungafani izingqimba kungukuthi ikhishwe. Ubukhulu yamagceke, elizoquketha broiler amachwane kufanele lube sezingeni elingenza ngamunye kwakufanele mayelana 60 cm isikhala. Isikhathi esining impela lezi amaphuphu etshalwa ningasoze phansi, futhi kumaseli. Kulokhu, izinga lokushisa emoyeni elachithwa kumele kube 2-4 degrees ephakeme Kunconywa.
Ngenxa ukumelana ekhethekile izifo broilers ngokuvamile ezahlukene, isikhala ukuze izinkukhu ngaphambi kokuba "sokuxazulula" ngempela kudingeka disinfected. Yiqiniso, akuvimbeli inqubo kanye zizalela izikhukhukazi ezinjalo. Ukunakekela izinkukhu itholakala lokuthi ukuthi kokubili inyoni umkhiqizo Amathrendi ngempela ukunikeza Izithako amaminerali. Lokhu kungaba, isibonelo, fly umlotha noma phansi igobolondo amaqanda. Kuwufanele ukubeka esibayeni nge umthamo melenko amatshe. Njengoba-mzimba, ikakhulukazi lapho broilers buhlanjululwe wayevame ukusebenzisa namafutha kafishi.
Nokho, sizobe ukubhekana neqiniso, indlela yokwahlukanisa nabesifazane kusukela kwabesilisa amatshwele. Yiqiniso, ukucacisa ngobuciko phansi ngaphandle ingane Iqanda kunzima. Kodwa noma kunjalo, kungakhathaliseki ukuthi ziningi kangakanani izinkukhu cockerels noma alethwe ku-incubator, ukuqapha futhi babanakekele kudingeka ngokucophelela ngangokunokwenzeka.
Hlanganisa ezivunayo "Don-1500B": ezibekiweko lobuchwepheshe. "Rostselmash" (Rostov-on-Don)
Indlela yokwenza ezinkanjini yabo izigwaca
Machines ukuvunwa esinezimila imifino
Ukuhlolwa kwegazi ngoba ephethwe umdlavuza. Kungenzeka yini ukuba umuntu abone umdlavuza kwegazi?
Russian-Swedish impi. Izimbangela, Ngemiphumela